Akụkọ - Ndị ọkachamara abụọ na -eme mkpọtụ na -aza ajụjụ abụba niile jụrụ oyi
Ndị ọkachamara abụọ Coolscupting na -aza ajụjụ abụba niile jụrụ oyi
Bịa ya n'oge oge bikini, mana n'oge na -adịbeghị anya, na nnọkọ oriri na ọ acrossụ acrossụ n'ofe mba ahụ, isiokwu alaghachila n'ọnụ ọnụ: CoolSculpting. Ọ bụghị teknụzụ ọhụrụ usoro kefriza abụbaA chọtara nke mbụ akpọ lipolysis frozen. Dị ka asịrị si kwuo, ndị dọkịta chọpụtara nrụrụ abụba abụba na ụmụaka riri ọtụtụ popsicles. Jason Roostaeian, MD, prọfesọ na dọkịta na -awa plastik na UCLA na -akọwa, "Abụba na -emetụta ọnọdụ okpomọkụ karịa akpụkpọ ahụ." "Ọ na -aga n'usoro ọnwụ mkpụrụ ndụ tupu akpụkpọ ahụ gị."
FDA kwadoro CoolSculpting na 2010 wee dọta mmasị mgbe ọ gbanwere aha ya site na ọgwụgwọ ntụpọ dị nro gaa na nke ọzọ na-adịghị emerụ ahụ na liposuction, na-ekwe nkwa iwepu aka ịhụnanya na njupụta nke bra site na ebili mmiri nke igwe mmiri jụrụ oyi. . N'oge na-adịbeghị anya, e wepụla ihe ndị na-egbu abụba nke na-abụghị ịwa ahụ iji dozie akpụkpọ ahụ na-agbada n'okpuru agba, nke bụ obere mpaghara nke siri ike ịgbanwe site na ụzọ sitere n'okike dịka nri na mgbatị ahụ. Ọ dị mma nke ukwuu ịbụ eziokwu? Dabere na Roostaeian na CoolSculpting master Jeannel Astarita na Manhattan, usoro a na -arụ ọrụ. N'ebe a, ha tụlere ins na mpụta abụba juru oyi, site na oke ibu ruo n'ihe egwu ahụike.
Kedu ka o si arụ ọrụ? Mmemme CoolSculpting na -eji otu n'ime paịndị okirikiri anọ na -a outụ akpụkpọ ahụ gị na abụba gị "dị ka oghere," Roostaeian kwuru. Mgbe ị na -anọdụ ala n'oche na -anọdụ ala ruo ihe dị ka awa abụọ, kọlụm jụrụ oyi na -amalite ịrụ ọrụ iji kpochapụ mkpụrụ ndụ abụba gị. Ọ sịrị, "Ndị mmadụ nwere ike ịnagide obere nsogbu a nke ọma." "[Ị ga -enweta] mmetụta nke ịmịkọrọ mmiri na jụrụ oyi, mana n'ikpeazụ ọ ga -ada." N'ezie, mmemme a dị mfe ịtọlite ​​yana ndị ọrịa nwere ike were rụọ ọrụ na laptọọpụ, na -ekiri ihe nkiri, ma ọ bụ na -ehi ụra mgbe ị na -arụ ọrụ na igwe.
Onye ka ọ bụ? Roostaeian kwusiri ike na ihe kachasị mkpa bụ na CoolSculpting “dabara adaba maka ndị na-achọ obere mmezi” ma kọwaa na emeghị ya maka iwepụ abụba mbụ dị ka liposuction. Mgbe onye ahịa bịara Astarita maka ndụmọdụ, ọ ga-atụle “afọ ndụ ha, ịdị mma akpụkpọ ahụ-ọ ga-amaliteghachi? Ọ ga-adị mma mgbe mwepụsịrị olu?-yana etu o siri dị ma ọ bụ tuo anụ ahụ ha, ”tupu ịkwado ha ịga n'ihu Tupu ọgwụgwọ, n'ihi na efere mmịpụta nwere ike gwọọ anụ ahụ ọ nwere ike ịbanye. "Ọ bụrụ na nzukọ mmadụ siri ike ma sie ike," Astarita kọwara, "agaghị m enwe ike iwetara ha nsonaazụ ịtụnanya."
Kedu ka ọ si pụta? Roostaeian kwuru, "Ọ na -ewekarị ọtụtụ ọgwụgwọ iji nweta nsonaazụ kacha mma. “Otu ọghọm dị na [CoolSculpting] bụ na onye ọ bụla nwere oke. Ahụla m ka ndị mmadụ na -ele foto nke mbụ na mgbe emechara mana enweghị ike ịhụ nsonaazụ ya. ” Agbanyeghị, olileanya niile furu efu n'ihi na ndị ọkachamara abụọ kwenyere na ka ị na -enweta ọgwụgwọ karịa, ị ga -ahụkwu nsonaazụ. Ihe ga -emecha mee bụ mbelata abụba ruru 25% na mpaghara ọgwụgwọ. “Mgbe ọ kacha mma, ị ga-efufu ntakịrị abụba-nwetụrụ ntakịrị mmụba n'úkwù n'úkwù na obere ịkpa oke na mpaghara ọ bụla. M ga -ekwusi okwu ahụ ike. ”
Ọ ga -eme ka ị felata? Astarita kwuru, "ọ nweghị ngwaọrụ ndị a ga -ebelata ibu," na -echetara ndị ọrịa nwere ike na akwara dị arọ karịa abụba. Mgbe ị tụfuru 25% abụba n'ime obere anụ ahụ, ọ naghị agbakọba n'ọtụtụ, mana ọ zara, sị, "Mgbe [ị ga -efunahụ] ihe karịrị uwe ogologo ọkpa gị ma ọ bụ bra, ọ dị ezigbo mkpa." Ndị ahịa ya bịakwutere ya ka ọ chọta oke ịdị arọ ka mma, ha nwere ike ịpụ n'ihi na "a na -ebelata nha akwa ahụ n'otu nha ma ọ bụ abụọ."
Ọ na -adịgide adịgide? “M na -emesi ndị ọrịa m ike na ee, nke a bụ usoro mfu abụba na -adịgide adịgide, mana ọ bụ naanị ma ọ bụrụ na ị chịkwaa oke ibu gị. Ọ bụrụ na ibu ibu, ọ ga -aga ebe ọzọ, ”Astarita kwuru. Ịgbanwe akparamagwa gị site na nri na mmega ahụ nwekwara ike ime ka ahụ gị dịte aka. "Enwere otu ihe gbasara gị: ọ bụrụ na ị na -eme atụmatụ ime okirikiri iri na anọ ma ghara ịgbanwe nri gị na ụdị nri gị, [ahụ gị] agaghị agbanwe ma ọlị."
Kedu mgbe ị kwesịrị ịmalite? Ebe ezumike na agbamakwụkwọ na -abịaru nso, Roostaeian na -atụ aro ka ị hazie nzukọ gị ọnwa atọ tupu oge eruo, ruo ọnwa isii. A naghị ahụta nsonaazụ ya opekata mpe izu anọ, na oke abụba na -agbago elu na izu asatọ. "N'izu iri na abụọ, akpụkpọ ahụ gị ga -adị nro ma maa mma karịa," Astarita kwuru. "Nke ahụ bụ cherry dị n'elu." Agbanyeghị, Roostaeian chetara, “Nsonaazụ mgbe ọgwụgwọ gasịrị fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezughị oke. [Ọgwụ] ọ bụla nwere oge ezumike, yabụ ị ga -achọ opekata mpe izu isii ma ọ bụ asatọ [n'etiti nhọpụta]. ”
Ọ dị mma? Ebe ọ bụ na nke a bụ ịwa ahụ na-adịghị emerụ ahụ, na-ekwukarị, ihe egwu dị na ya pere mpe. Eserese na -enweghị oge nwere ike ime n'otu ụzọ ahụ liposuction. Ọ bụ ezie na CoolSculpting igwena-ahapụ ohere dị ntakịrị maka njehie mmadụ na mwepụ abụba, ọ nwekwara ike ya n'ibelata abụba dị mma, dị ka dọkịta na-awa plastik maara ihe nwere ike iji aka ya. Yabụ, ihe nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya bụkwa na akwara irighiri akwara gị na-adị ka a ga-asị na ha na-ehi ụra “izu ma ọ bụ ọbụna ọnwa-nke a nwere ike ime,” Roostaeian kwetara. Ọ dịghị ọnya ga -eme na ọzịza ahụ pere mpe. Ekwesịrị ka gị na dọkịta gị kwurịta ihe egwu ndị ọzọ.